Ko 911 raive basa remukati? De Telegraaf ine mhinduro kumibvunzo yako yose! : Martin Vrijland
Ko 911 raive basa remukati? De Telegraaf ine mhinduro kumibvunzo yako yose!
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi we11 September 2019	• 12 Comments
Iye mukomana anonzwira tsitsi, Wilson Boldewijn, izvo zvaive pachena mukutaura kwandakaita naye mwedzi mishoma yapfuura (ona pano. Mhumhi dzakapfeka zvipfeko zvehwai nguva dzose dzinotaridzika semamwe makwai uye nokudaro zvinoita sezvisina kutyisidzira. Wilson atanga kuateedzana zvinyorwa zvinyorwa umo anofukidza zvese zvirevo zvikuru zvekurangana izvo, maererano naDe Telegraaf, zviri kutenderera. Iye unounza tenzi mukushora kwakadzorwa, George van Houts, pamberi pekamera, pamwe naSilvan Schoonhoven, "mutori wenhau wehugandanga" weTelegraaf. Iwe unofanirwa kuzviona nenzira iyoyo. Imwe inoshandiswa nomubhangi kuti ape kutaridzika sekushoropodzwa kwemubhaya nyama uye imwe inomiririra mubati iye amene; mubatsiri anoongorora nyama yake.
Dzidziso dzekupangana dzinogona kuwana rutsigiro. Zvirokwazvo kana iwe ukadzipamhidza nenzira yekuti iine zvirevo zvekuti iwe unoziva kumberi kuti iwe unogona kuvhiringidza pasi pane imwe nguva inotevera (bhomba mune yakapetwa mbiri). Dzidziso dzekusangana dzinogona kukura mukufadza nechikonzero chakakosha. Icho chikonzero chinowanikwa muchokwadi chekuti ivo vanobatanidzwa kune 'kurudyi-mapapiro mazano' kana iyo 'kurudyi-mapapiro' brand (Chirungu kune 'kurudyi'). Kana iwe uchigona kubatanidza boka iro, uyo anofunga kudaro, kumubatanidzwa wezvematongerwo enyika uye zvakare kubvumira iyo nhambo kuti isvike simba uye vozoita kuti hupfumi hupere zvakanyanya, iwe unenge wakanangana neboka iro rese uye kushoropodzwa mune kamwe kwakadonha. .
Wona Telegraaf mushumo pano uye uverenge pazasi.
Isu tiri kuzviona zvichiitika kuUS naDonald Trump uye kuUK neBrexit yekufamba. MuBrazil ndiyo "kurudyi" Jair Bolsonaro uyezve muEuropean ese takawona kusimuka kubva kurudyi, asi kudzora kwekudzvanywa kweiyo brand kwatoitwa. pano tsananguro izere. Unogona saka kutanga kutenda pakurangana; chete kana mushanduro iyoyo yakafungidzirwa nesimba rimwe chetero. Nzira yakanakisa yekuchengeta bato rinopikisa kuzvidzora pachako. Ndokusaka iwe uchitungamirwa kure kubva kunzvimbo yakaita seiyi uye ndosaka zita rangu rakasviba peseeforamu uye mune yega yega hurukuro yekukurukurirana uye rakapiswa nemabasa ehurumende (vashandi vepamba uye telemarketer kumashure kwakadzika profiles), zvekuti unoshambira mumambure akachengeteka echikepe chinodzorwa.
Muchokwadi, tinogona kutaura kuti hazvichisina basa kana chokwadi pamusoro pe911 chichiuya pachena. Kana iwe usingatendi muhurukuro yepamutemo ye911, iwe watove unoshatiswa kuboka re 'kurangana kwevanofunga' uye rakabatana neiyo 'kurudyi' chiratidzo. Kana paine dambudziko rakakura uye iwe unogona kuchiisa mune shangu dzevarume vemberi veiyo mhando (kuva Donald Trump, Jair Bolsonaro, Boris Johnson, Thierry Baudet uye zvichingodaro), ipapo vanhu vese vanoseka boka iro uye munhu wese anova inodzoserwa kumashure kune inozivikanwa yenhau uye yekare tsika yezvematongerwo enyika. Kuti dambudziko rakakura kudaro riri kuuya, zvingave zvakajeka kune vazhinji ikozvino.
Chaizvoizvo, kutenderera 911 iwe unogona kutaura kuti pakanga paine chikonzero chakakwana chekuisa pamwechete chisungo, zvisinei kuti Silvan Schoonhoven anoita chaizvo kuti akumbire zvakananga. Iyo 'yakagadzirirwa kuputika mhosva nyaya', zvisinei, inoita kunge iri bhomba mune yakapetwa kairi ye 911 zano rekurangana. Dzimwe pfungwa dzinogona kuongororwa. The tsananguro yaJudy Woods inganzwika seinonzwisisika, asi iyewo anoratidzika kunge akakandirwa chaizvo pabasa rake rekukanganisa tsanangudzo (inofungidzirwa) yechokwadi. Iwe unongoda munhu akadaro vanodzedzereka vasina chokwadi chekupenga bvisa uye wapedza. Kuburitswa kweiyo firimu 'Yakaregedza Shanduko' (sezvakataurwa naWilson Boldewijn mufirimu yetragraph) inoratidzawo pachena nzira iyo kupikiswa kwese kunodzorwa nesimba. Vanogara vachivaka mune nemaune kukanganisa kuti vakwanise kukanganisa nyaya yacho yese gare gare.
Imwe nzira yekupusha kupikisa yaive mu2009. IAmerican 911 'chokwadi chinofamba' chainyanya kutungamirwa nemunhu anonzi Ace Baker. Baker ainyanya kufarira 911 'chokwadi anotsvaga' kwemakore. Akanzwika mune mamwe ma media mawairesi mazhinji radio. Kusvika panguva iyo Ace Baker paakasvika paJim Fetzer show yekuzviuraya (ona vhidhiyo pazasi). Zvirinani, ndozvaive kurira kwaiita nekuda kwepfuti, asi kwete zvakazonyanya kuve ave mupenyu uye nekukanda zvakare.
Pese panobuda pfungwa dzekurangana, senge dza Judy Woods kana vamwe, iwe unofanirwa kushamisika kuti ndiani anotsigira zvese izvo tsvagurudzo. Iwe haugone kuita izvozvo kubva muhomwe yako. Uye zvakare nevarume vese vemberi, avo sezviri pachena vane mari nemidziyo yekushandira basa ravo, isu tava kuziva manje kuti vazhinji vari kushandira muchivande mubhutu. Vamwe vanhu vepamberi mune imwe nzira yekudyara (inozivikanwawo seye 'chokwadi kufamba') vanobvumidzwa kukwevera makamuri makamuri kwemakore kuti angoerekana abatana, semuenzaniso, pedophilia.
Muenzaniso wakanaka weichi aive Zen Gardner, uyo 2 waakangoerekana abuda makore apfuura semutungamiriri wemweya mukati mekereke yeVana vaMwari. Aive asiri mune kwenguva pfupi (semuenzaniso, gore). Kwete, iye aiburitsa 27 kwemakore. Vana veVamwari chinamato vaizivikanwa nekusimudzira uye kuita zvepabonde nevana vadiki mukudzidzisa kwavo. Izvo zvishoma. Nekudaro, vanhu vakaita saWillem Felderhof naOle Dammegard, ivo vakazadza horo ne, semuenzaniso, musangano weOpfungwa, vanoramba vachidzivirira murume neruoko uye mazino (ona pano en pano. Isu tinorarama munguva iyo chokwadi chakaomesesa kufungidzira kune vanhuwo zvavo, kana chete nekuda kwehunyanzvi hwese huri pamusika (ona. pano. Zvichida dambudziko rakakura nderekuti pese kupikiswa pawn kunouya kubva kune butcher. Chero ani zvake ane hunyanzvi hwekurima anogona kufunga kuti 911 raive basa remukati.
Verenga mukati ichi chinyorwa kuti izvozvo zvinofambidzana sei nevari pasi, nekuti zvakakosha kuti udzidze kuita mutsauko.
Kukurukurirana kwefoni naWilson Boldewijn kubva kuDe Telegraaf: nyaya dzinotaura nezvemagariro evanhu
911 yekuongorora komiti inotanga mhosva kumusangano weUnited States
George van Houts, peacock nevhavha yegoridhe sekuchengetedzwa kwemutambo bait (bowl plot 911)
Rarama mubvunzurudzo naMartin Vrijland paTelgraaf.nl naWilson Boldewijn (video)
Vanyengeri, DWDD, Kajsa Ollongren uye mhirizhonga yekusimudzirwa kweAIVD uye 'chengetedza chechokwadi'
Tags: 911, Waini yakaoma, conspiracy, conspiracy theory, rangano rwenhema, inodzorwa, George, Woods, mukati mebasa, brand, kushorwa, kurudyi, Silvan Schoonhoven, telegraph, motokari, Wilson
11 September 2019 pa 21: 12
Hazvina basa zvekare kuti zvakaitika sei.
Kana iwe ukaverenga zvinongedzo zvebhuruu mune chinyorwa chiri pamusoro, iwe unozoendeswa kune.
Dambudziko, Reaction, Solution… ..
Yakawanda sei mitsara yakamanikidzwa nehuro dzevanhu mushure me9 / 11. Ndiani achabatsirwa nazvo? Uye izvozvo zvinobatsira here?
Iyo bhatiri kubva kune yekuwedzera kune iyo minus inoyerera zvakanaka zvakare.
Pamusoro pekuti vagari vakajairwa (hapana CIA kana AIVD) vanogona kutarisa maawa e24, ivo zvakare vanofanirwa
vashandi veavo masevhisi ekuchengetedza anoongororwa kunze, nekuti haumboziva.
Chese chinhu chakagadzirwa chisina mvura kusvika pakupedzisira ruzivo.
Security masevhisi haatombo kubvuza nekuti anozvitarisisa iwo kuti avuza.
Ingo tarisa muhofisi iri paBasisweg, Boldewijn haambofa akakohwa… (zvakadaro AT5 (nhengo dzechikoro dzeAIVD hadzibvumirwi kuita kudaro), Big Brother
11 September 2019 pa 23: 03
iyo Telegraaf seyunopi nekuda kwerudzi urwu rwekunetsekana, isu hatifanire kushamisika kuti .. .. kutamba kweIsrael vaishandira Mossad uye vakasungwa havana kutaurwa, zita raDanny Jowenko haritaurwe kana kuferefetwa kwaFox iye amene yakaratidza kuti panguva imwechete nekuvhiyiwa uku kwaive kwakaverengeka kweavo vakapinda muIsrael pa radar yeFBI .. Chokwadi, njodzi yeBijlmer haisirizve ichitaurwa, vatambi vamwe chete?
avo wakashinga waini, schoonhoven vaizofanira kupfuura 'vatapi venhau', ivo varidzi pachena uye nyore ..
12 September 2019 pa 15: 56
iyo waya kubva ku Fox ichiri kushanda, asi isu hatifanire kugara iyo kwenguva yakareba ... maererano nemunhu akasarudzwa
11 September 2019 pa 23: 13
Alan Sabrosky akadaro muhurukuro neredhiyo mu2010, kuti kusagadzikana kwake kwenyaya yepamutemo 9-11 nyaya yakafambiswa neuchapupu hwaDanny Jowenko. Sabrosky akadzokorora izvi muhurukuro yaJuly 13th 2011.
Iyo saiti yekufa kwaDanny Jowenko
Akafira mutsaona imwe yemotokari mumugwagwa wakananga mumusha weSerooskerke, kuNetherlands, pa16th yaJuly 2011.
Abreu Chirevo akajekesa chinyorwa paMarch 02, 2016 9 / 11 Whistleblower Murdered paDutch Soil neUS Intelligence.
15 September 2019 pa 14: 24
inongotsigirwa nesainzi nehuchapupu, asi haunzwi teregiramu nezve izvo ..
Kesari Lion Cachet akanyora kuti:
12 September 2019 pa 08: 44
Ini ndaive ndichiri mumwe wevakarasika vaifunga kuti vaigona kuzvifunga ivo. Zvino ini Nguva dzose ndinoyedza kufunga chero chinhu pazvinosvika, pakati pezvimwe zvinhu, kuwana chokwadi. Ini ndiri kungo durura pfungwa dzangu nguva dzose uye ndinokumbira simba rechokwadi ... Ipapo iwe unozoona kuti hapana chokwadi zvachose. Asi enda unotsanangura kuti mumitsara mishoma uye chii chine basa?! Chinhu chete chakakosha ndechekuti vaSatani manyepo vanoziva kuti vari kutariswa neboka rakakura kwazvo reVANHU VANOGADZIRA!
12 September 2019 pa 20: 11
Pane musiyano mukuru pakati pe "chokwadi" ne "chokwadi". Uyu mutsauko unotora mafomu akawanda munharaunda yedu. Ini ndinofunga kuti bhasiketi ndiyo inozivikanwa kwazvo kuvanhu vazhinji, asi isu tinoramba tichiigamuchira uye tichitevera. Kune edu elite anenge akanaka chiratidzo kuti vaone kuti vangaenda kupi nenhema dzavo.
13 September 2019 pa 15: 25
Iwe une vanhu vazhinji uye vanhu vazhinji?! Ndiri mumwe wevanhu vasinganzwisise chimiro chako!
13 September 2019 pa 15: 33
Tarisa kumusoro ...
13 September 2019 pa 23: 57
Broadcast pa 28 June 2001….
14 September 2019 pa 12: 15
ZIO yakakura kwazvo pamusoro payo, asi mashese anongorega zvichiitika asingatore mutoro uye achisara achivimba nechero nhema.
vanofungidzirwa kuti havagone kukwana, ivo vanoramba vachiveurwa kusvika vakomana ... uye ipapo vanoramba vakaiswa
16 September 2019 pa 17: 01
rega ndingo taura kuti haina kushata neyakajeka 'pfungwa yevarombo' ndobva ndataura kubva pandakazvionera ndega. Vanhu vazhinji havadi izvozvo pasina kungwarira kushushikana kunoitika, hurongwa hwekubva mudumbu kusvika paguva hwakadzika midzi.
« US ichabhadhara rini mamiriro ekunze pamabhomba iwaya avanokanda?
Kurumidza kufona! Isu tinofanirwa kuisa midhiya kunze kwekuita IZVOZVI! »
Total Visits: 12.385.829
Chii chiri chokwadi nezve kuuraya kwaDerk Wstersma uye izvo zvinoreva chii kune 'korona chapupu'?
Pachave nehondo pakati peUS neIran nekukurumidza zvikuru izvozvi?
Aimbova Disney Channel asterisk anoti akashungurudzwa neHollywood pedophiles
Kurumidza kufona! Isu tinofanirwa kuisa midhiya kunze kwekuita IZVOZVI!
Martin Vrijland op Chii chiri chokwadi nezve kuuraya kwaDerk Wstersma uye izvo zvinoreva chii kune 'korona chapupu'?
Camera 2 op Chii chiri chokwadi nezve kuuraya kwaDerk Wstersma uye izvo zvinoreva chii kune 'korona chapupu'?
Karel Reuterz op Chii chiri chokwadi nezve kuuraya kwaDerk Wstersma uye izvo zvinoreva chii kune 'korona chapupu'?
Kesari Lion Cachet op Pachave nehondo pakati peUS neIran nekukurumidza zvikuru izvozvi?
Itai 1.635 vamwe vanyori